1 & 2 Rukoko PCB Vagadziri | China 1 & 2 Rakagadzika Pcb Fekitori & Vatengesi
2 dura redunhu bhodhi ye smart elektroniki kukiya
Iyi i2 yakatenderera wedunhu bhodhi smart imba yemagetsi kukiya. Ul Certified ShengYi S1141 FR-4 tg130, 1.0mm bhodhi ukobvu, 1 OZ (35um) mhangura ukobvu, Kunyudza goridhe kupera, girini solder mask uye chena sirika skrini. Sezvo iri bhodhi diki, iyo PCB inounzwa nepaneru 20 * 3 = 60 PCS padanho. Rondedzero yeprofile inoshandisa chitambi gomba uye CNC kukosheswa. Zvese zvigadzirwa zvinogadzira neRoHS zvinodiwa.
2 dura redunhu bhodhi HASL Tungamira Mahara kupera
Iyi i2 yakatenderera wedunhu bhodhi yezvinhu zvinogadziriswazve chigadzirwa. UL yakasimbiswa ShengYi S1141 FR-4 tg130, 1.6mm bhodhi ukobvu, 1 OZ (35um) mhangura ukobvu, HASL inotungamira yemahara kupera, girini solder mask uye chena sirika skrini. 3 PCS padanho neV-Cheka pepa rekugadzirisa. Zvese zvigadzirwa zvinogadzira neRoHS zvinodiwa.
2 dura redunhu bhodhi yakafukidzwa hafu gomba pcb yeSensor chigadzirwa
Iyi i2 denderedzwa redunhu bhodhi ine yakafukidzwa hafu gomba yechigadziro chigadzirwa. Ul Certified Shengyi S1141, FR-4 tg130, 1.6mm ukobvu, 1.5 OZ (50um) ukobvu hwemhangura, girini solder mask uye chena sirika skrini. Iko kune QR-kodhi paPCB yekuziva. Zvese zvigadzirwa zvinogadzira neRoHS zvinodiwa.
1 & 2 rukoko pcb \_ RoHS ateerere 2 rukoko FR4 pcb
Iyi i2 yakatenderera wedunhu bhodhi ine kunyudza goridhe kupera. Iwo maratidziro akajairwa, FR4 tg130, 1.6mm ukobvu, 1 OZ (35um) ukobvu hwemhangura, girini solder mask uye chena sirika skrini. Sezvo iri bhodhi diki, iyo PCB inounzwa nepaneru 20 * 3 = 60 PCS padanho. Rondedzero yeprofile inoshandisa chitambi gomba uye CNC kukosheswa. Zvese zvigadzirwa zvinogadzira neRoHS zvinodiwa.